EyeKhala 23, 2018 by URamona Isai, Iimbono zizonke:
Makhe siqwalasele ezinye zeengeniso kunye neengozi zokubandakanya iiplani zomgangatho kuludwe lwezindlu.
URamona Isai Julayi 23, 2018
Olu ngeno yafakwa kwi Intengiso yeNtengiso yePropathi noqhotyosho Yakha indlu yakho, Yila ikhaya lakho i-3D, umgangatho womgangatho, uyilo lwasekhaya, isoftware yoyilo ekhaya, umyili wendlu, Isicwangcisi segumbi, uyilo lwegumbi elibonakalayo. Bookmark le Permalink.
Julayi 28, 2018 Zuza imali esemgangathweni kunye neNkqubo yeQabane ekuHlaliswa kuyo Ukucwangciswa kweWiz ngumcwangcisi weplanethi we-intanethi ovumela iarhente yearhente yearhente yokuthengisa izindlu ukusuka kwizinto ezilula ukuya kwizakhiwo eziyintsonkothileyo zentengiso. Isixhobo sethu siye sagqitywa sigcwaliswe liqela leengcali ezinkulu kangangesithuba seminyaka eli-10 senze iinzame ezinkulu zokwenza imveliso epheleleyo ehlangabezana nazo zonke iimfuno ezibonakala kucwangciso lomgangatho. Ukuba ubukho bewebhu ukujikeleza iipropathi, ukuphuculwa kwepropathi kunye nokulungiswa kwezakhiwo, ngokubandakanya le 2D kunye neeplani ze-3D zomgangatho weplani isixhobo sakho […] exhonyiweyo Ishishini lokuthengisa izindlu
Agasti 26, 2016 Yakha indlu yePhupha lakho ngeJetta-talo Sonke kufanelekile ukuba sibe nayo indlu esiyinqwenelayo. Ukuba awuyifumani indlela yokufezekisa amaphupha akho, le nkampani iJetta-Talo yeyakho! Le nkampani yahlukile kuba inokwakha indlu le nto uyifunayo. Nokuba lolona luvo lubalaseleyo ebomini, Ke, ukuba awunawo umfanekiso wendlu efanelekileyo, iingcali zethu zinokukunceda ukhethe indlu kuluhlu lweemodeli ezikhoyo. Ngenxa yoko, qiniseka, uya kwaneliswa! Uyakha kanjani indlu esuka kumaphupha akho [] exhonyiweyo Indawo yokwakha izindlu, Indawo yokuthengisa izindlu eluhlaza
Julayi 6, 2016 Intengiso yasimahla yeZindlu kunye neNtengiso yePropathi eHlawulwayo. Ezona Ndlela zisebenzayo zeNtengiso Ukuthengisa ipropathi yakho ngokukhawuleza, kwaye kwangaxeshanye ngexabiso elifanelekileyo, ke umcimbi wokuthengisa kufuneka uqwalaselwe, kwaye ungashiyi esi sigqibo "ngenceba yekamva." Sele wenze okuninzi: uzise ipropathi yakho ngolungelelwano, ulichaze ngokucacileyo ixabiso, ubhale isibhengezo sentengiso malunga nokuthengiswa kwezindlu ... Wenza ntoni emva koko? Kulungile - intengiso yokuthengisa izindlu nomhlaba! Emva kwayo yonke into, kuba ufuna ukuthengisa ipropathi ngaphandle koncedo lomthengisi, uyaku [ exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi
Aprili 12, 2018 Yintoni eyenza ukuba iMakethi yeVenethi yeVancouver yahluke ngo-2018? IVancouver sesinye sezona zixeko zikhula ngokukhawuleza emhlabeni ingakumbi xa kufikwa kwezindlu nomhlaba. Indawo yayo, inani labemi, kunye nokukhula kwezoqoqosho kubonile inani elikhulu labantu kubandakanya iingcali kunye nabaphuhlisi abahamba apha. Okwangoku, indawo yesi sixeko inabemi abahlukeneyo abangaphezu kwezigidi ezintathu kwaye oku kube nefuthe elikhulu kwizindlu nomhlaba. Nangona kunjalo, xa kuthelekiswa nezinye izixeko kunye neemarike, iarhente yeVancouver yihlukile kwaye yahlukile kweyayo […] exhonyiweyo Ukuthengisa ngokuthengisa izindlu nomhlaba
Novemba 16, 2016 Iingcebiso ngokuSebenza ngempumelelo kwiNdlu evulekileyo Kukho mpikiswano malunga nokuba izindlu ezivulekileyo ziyanceda na ukuthengisa indlu xa abathengi abanokubakho banokujonga nje imifanekiso kunye neevidiyo zamakhaya kwi-intanethi. Kodwa iiarhente ezininzi zikholelwa ukuba izindlu ezivulekileyo, enyanisweni, ziyaphumelela. Ayaneli nje ukubonelela ngendlela elula yokuyibona indlu ngaphandle kokuqesha kunye nokujonga indlu ngokwasemzimbeni emva kokujonga iifoto, kodwa inokukhokelela kushishino lwexesha elizayo kwabo banokubabuyayo ekhaya abatyelelayo. Nazi iingcebiso ezintathu zika […] exhonyiweyo Intengiso yeNtengiso yePropathi